शीर्ष १० गल्तीहरू मारिजुआना र सीबीडी व्यवसायहरूले खोजी ईन्जिन अनुकूलनको साथ बनाउँदछ
शीर्ष १० गल्तीहरू मनोरन्जन मारिजुआना ...
यो साइट मोबाइल अनुकूल छ कि छैन भनेर सुनिश्चित गर्दै
सबै इन्टरनेट खोजी गर्नेहरूको percent 75 प्रतिशत मोबाइल उपकरणहरू मार्फत गरिन्छ। यो विशेष गरी अधिक व्यावसायको लागि साँचो हो जुन शारीरिक ठेगाना छ किनकि धेरै जसो यी सम्भावित ग्राहकहरू हिडिरहेका छन्। गुगलले यो परिवर्तन २०१ 2014 मा शुरू गरेको थाहा पाए जब मोबाइल खोजले पहिलो पटक डेस्कटप खोजीहरूलाई ग्रहण गरेको छ। गुगल वास्तवमा हुनेछ PENALIZE तपाईंको साइट यदि यो मोबाइल मैत्री छैन। गुगलको मोबाईल मैत्री लिंकको साथ तपाईले अहिल्यै आफ्नो वेबसाइटको परीक्षण गर्न सक्दछौं। https://search.google.com/test/mobile-friendly
तिनीहरूको वेबसाइटमा उत्पादन मेनू होस्टिंग भएको छैन।
धेरै मनोरंजन मारिजुआना औषधालयहरूमा मेनूहरू लेफ्लाइ वा वीड नक्शा जस्ता तेस्रो पार्टी साइटहरूमा होस्ट गरिएको छ। यो निम्न कारणहरूले गर्दा ठूलो गल्ती हो:
ए गुगल खोजी ईन्जिन वेबसाइटहरू रुचि गर्दछन् जसले उनीहरूको सामग्री बारम्बार अपडेट गर्दछ। प्राय जसो साइट अपडेट गरिन्छ प्रायः साइट गुगल क्रॉलर द्वारा अनुक्रमित हुन्छ।
B.सामग्री राजा हो, अधिक सामग्री भएको वेबसाइट लगातार कम छ भन्ने भन्दा उच्च स्तरमा जान्छ।
सी। तपाईंको उछाल दर धेरै उच्च हुनेछ। बाउन्स रेट एक एसईओ टर्म हो जुन मापन गर्दछ कि प्रयोगकर्ताहरू तपाइँको वेबसाइटमा कति लामो समय सम्म रहन्छन्। यदि तपाईं गुगल मारिजुआना र यो एक वेबसाइट ल्याउँछ कार पार्ट्स बेच्ने तपाईं तुरून्त पछाडि क्लिक गर्नुहोस् र तपाईंको खोजी जारी राख्नुहुनेछ। गुगलले यस मेट्रिकलाई एक संकेतको रूपमा हेर्दछ जुन तपाईंको वेबसाइट स्पामी वा कम गुणवत्ता हो। व्यक्तिहरू जुन सूचना उनीहरूले खोज्न सक्छन् साइटमा लामो रहन र सूचना पढ्न।
D. यदि तपाईंको मेनू तपाईंको साइटमा छैन भने ग्राहकहरू जो विशिष्ट उत्पादनहरूको लागि खोजी गरिरहेका छन् तपाईंको प्रतिस्पर्धी बरू जान्छन्। यहाँ एक उदाहरण छ,
प्रयोगकर्ता खोजीकर्ताहरूका लागि टाकोमामा निलो सपना यहाँ परिणामहरू छन्।
मारिजुआना व्यवसायहरू जुन तिनीहरूको वेबसाइटमा तिनीहरूको मेनू छैन कहिल्यै यी स्थानीय खोजीकर्ताहरूमा देखाउनुहोस्।
साइट निर्माण गर्नु अघि कुञ्जी खोज अनुसन्धान गरिरहेको छैन।
यदि तपाइँ कुञ्जी खोज अनुसन्धान गर्नुहुन्न जुन कुन खास उपकरणहरूको प्रयोग गर्ने प्रक्रिया हो जुन व्यक्तिले खोज्दछन् कुन खोजशब्दहरूले तपाइँलाई सबैभन्दा बढी खोजी गर्दैछ तपाइँ तपाइँको प्रतिस्पर्धीहरू भन्दा कम ट्राफिक र बिक्री पाउनुहुनेछ। आधारभूत किवर्ड रिसर्च गर्नका लागि सजिलो तरीका भनेको गुगलमा तपाईंको लक्षित शब्द टाइप गर्नु हो। को स्वत: पूर्ण सुझावहरू उपभोक्ताहरूले तपाईंको उत्पादन वा सेवाहरू फेला पार्न प्रयोग गरिरहेका शब्दहरूको प्रकारहरूमा राम्रो संकेतहरू हुन्। यदि तपाइँको वेबसाइटले शीर्षकमा यी कुञ्जी शव्दहरू समावेश गर्दैन भने मेटा वर्णन र तपाइँको वेबपृष्ठको मुख्य भाग तपाई धेरै ग्राहकहरुमा हराउनुहुनेछ।
एक ब्लग छैन।
तपाईंको ब्लगले निम्न उद्देश्यहरू प्रदान गर्दछ:
उत्तर: यसले तपाइँको वेबसाइटमा सामग्री थप गर्दछ। तपाईं उत्पादन समीक्षा, कथाहरू, घटनाहरू र अधिक थप्न सक्नुहुन्छ।
B. यसले तपाइँको वेबसाइटलाई ताजा सामग्रीको साथ अद्यावधिक राख्दछ जुन तपाइँलाई उच्च श्रेणीकरण दिनेछ।
सी। तपाईले लामो पुच्छर कुञ्जी शब्दहरू लिनुहुनेछ जुन सबै खोजीहरूको percent 75 प्रतिशत हो। एउटा छोटो पुच्छल कुञ्जी शब्द "मेरो नजिकको औषधालयहरू" को रूपमा हुन्थ्यो एउटा लामो पुच्छर खोजशब्द "सिएटलमा सब भन्दा राम्रो मनोरञ्जन मारिजुआना औषधालय के हो" हो। यो पनि सम्झनुहोस् कि २ day प्रतिशत खोजीहरू ती हुन् जुन गुगलले पहिले कहिल्यै देखेका थिएनन्। एक ब्लग जोडेको र यसलाई राम्रो सामग्रीको साथ अद्यावधिक राखेर तपाईं यी ग्राहकहरूको अधिक क्याप्चर गर्नुहुनेछ।
महत्वपूर्ण एक्स औषधालय इंडोर / आउटडोर वाइफाइ क्यामेरा
१ 199.99 119.00 XNUMX बिक्रीको लागि ११ .XNUMX.०० को लागि
तपाईको गुगल ब्यापार लिस्टि and र गुगल प्लस पृष्ठ अप्टिमाइज गरीरहेको छैन।
गुगल अन्य सामाजिक र समीक्षा साइटहरु जस्तै फेस बुक र येल्पको साथ प्रतिस्पर्धा गर्न कोशिस गर्दैछ। तपाईको गुगल व्यवसाय लिस्टिंग पूरा गरेर र सान्दर्भिक तस्वीरहरू थप गर्नाले गुगल तपाईंको व्यवसायलाई गम्भीर रूपमा लिने र यसलाई उच्च सूची गर्ने सम्भावना बढी हुन्छ। साथै तपाईंको गुगल प्लस पृष्ठहरू अपडेट गरेर र तपाईंको ग्राहकहरूलाई तपाईंको पृष्ठ अनुसरण गर्न प्रोत्साहन दिनुहोस्। तपाईंको पोष्ट उनीहरूको खोज परिणामहरूमा झट्टै तत्काल देखिनेछ।
तपाईं-ट्यूब मार्फत मार्केटिंग गर्नुहुन्न
गुगल संसारको सब भन्दा ठूलो खोज ईन्जिन हो, जुन धेरै व्यक्तिहरूले महसुस गर्दैनन् त्यो भनेको तपाईं-ट्यूब संसारकै दोस्रो ठूलो खोज ईन्जिन हो। र के अनुमान? गुगलको तपाईं-ट्यूबको स्वामित्व छ। गुगलले यूट्यूब-ट्यूब भिडियो मन पराउँछ किनभने उनीहरू विज्ञापन बिक्रयाउन सक्दछन् जब पनि प्रयोगकर्ताले तिनीहरूलाई हेर्दछन्। त्यसोभए यसले तपाइँको व्यावासायको लागि यु-ट्यूब च्यानल राख्नुको मतलब र तपाइँको व्यवसायसँग सम्बन्धित नियमित पोष्ट कुञ्जीशब्द रिच भिडियोहरू बनाउन समझदारी हुनेछ।
ग्राहकहरूको ईमेल स collecting्कलन गरिरहेको छैन
एक दिन देखि तपाइँको वेबसाइट को एक खण्ड हुनु पर्छ जहाँ ग्राहकहरु आफ्नो नाम र ईमेल ठेगाना तपाइँको मेलिंग सूची मा सामिल हुन सक्छ। तपाईं त्यसपछि यो मेलिंग सूची घटनाहरू, छुट र डलरमा पैसाको लागि प्रतिस्पर्धाको घोषणा गर्न प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईंको साइटमा विक्रेताहरूलाई लिंक गर्न आवश्यक छैन।
गुगलले वेबसाइटको शक्ति निर्धारण गर्ने सब भन्दा महत्त्वपूर्ण तरिकाहरूमध्ये एक अन्य कति वेबसाइटहरूले तपाईंलाई फिर्ता लिंकहरू औँल्याउँछ। यो एक को रूपमा गणना गर्दछ इन्टरनेट भोट कि तपाइँको वेबसाइट एक वास्तविक व्यवसाय हो र राम्रो सामग्री छ। जबकि सबै लिंकहरू बराबर छैनन्; तपाइँ वेबसाइटहरुबाट लिंकहरू चाहानुहुन्छ जुन व्यवसायको उही क्षेत्रमा तपाइँ हुनुहुन्छ। तपाइँका कति विक्रेताहरुसँग वेबसाइट छ? त्यहाँ सबै साइटमा तपाइँसँग सबैको लिंक देखाउनुहोस्। यो मद्दत गर्दछ बरु व्यवसाय तपाईं दुबै को लागी उच्च बृद्धि बिक्री रैंक।
कर्मचारीहरू सामग्री र सामाजिक साझेदारीमा संलग्न छैनन्।
तपाइँका कतिजना कर्मचारीहरूको फेस बुक, ट्विटर वा गुगल खाताहरू छन्? के उनीहरूले तपाईंको ब्ल्ग पोष्ट पोष्ट गर्दै र साझेदारी गरिरहेका छन्? के उनीहरू तपाइँको वेबसाइट मा टिप्पणीहरु छोडदै छन्? के त्यसले तपाईंको व्यवसायको बारेमा अनुकूलन सामग्री र लेखहरू सिर्जना गर्दैछ? यदि ती छैन भने तिनीहरू हुनु पर्छ। अधिक सामाजिक सेयर तपाईको व्यवसाय मा छ अधिक तपाइँको वेबसाइट को रैंक हुनेछ। तिनीहरूको सफलता तपाईंको सफलतामा निर्भर गर्दछ।
हाम्रो गाइड पढ्नुहोस् Ways तर कर्मचारीहरूले तपाईंको खोजी ईन्जिन अनुकूलन सुधार गर्न सक्दछन्।
तपाईको गुगल समीक्षाहरूको जवाफ दिदैंन।
द्वारा गरिएको एक सर्वेक्षण अनुसार ब्राइटलोकल % 88% ग्राहकहरूले अनलाइन समीक्षालाई व्यक्तिगत सिफारिशमा त्यति भरोसा राख्छन् - जुन आश्चर्यजनक कुरा हो जब तपाईं यो तथ्यलाई हेर्नुहुन्छ कि समीक्षा उनीहरूले नचिनेका मानिसहरूद्वारा पोष्ट गरिएको हो। ब्राइटलोकलले उही सर्वेक्षण; निर्धारित गरियो कि जनसंख्याको केवल १२% ले व्यावसायिक सेवाहरू वा उत्पादनहरूको समीक्षा पढेनन्। अधिकांश व्यवसाय मालिकहरूलाई थाहा छैन कि उनीहरू आफ्ना समीक्षालाई जवाफ दिन सक्दछन् र यदि तपाई यसलाई राम्रोसँग प्रयोग गर्नुहुन्छ भने तपाईको फाइदा हुन्छ। गुगलले व्यवसाय मालिकहरुलाई राम्रो समीक्षा र अझ महत्वपूर्ण कुरा नराम्रो पूनरावलोकनको लागि जवाफ दिन प्रोत्साहन दिन्छ। यो Google र ग्राहक देखाउँदछ जुन तपाईं आफ्नो अनलाइन प्रतिष्ठाको ख्याल गर्नुहुन्छ। गुगलले यसलाई यसको संकेतको रूपमा पनि हेर्छ जुन तपाईंको व्यवसाय वैध हो र तपाईंलाई उच्च श्रेणीमा राख्दछ।
तपाईंको गुगल समीक्षामा कसरी प्रतिक्रिया दिने सिक्न यहाँ जान्नुहोस्। https://support.google.com/business/answer/3474050?hl=en
ग्राहक समीक्षाको जवाफ दिनको उदाहरण
डिस्पेंसरी खोज इञ्जिन अप्टिमाइजेसन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चीजहरू मध्ये एक हो जुन तपाईं थप ग्राहकहरू ल्याउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईंको व्यवसाय गुगलको पहिलो पृष्ठमा छैन भने ती ग्राहकहरू तपाईंको प्रतिस्पर्धी जाँदैछन्।
Isenselogic.com डेभिड मेशाचको स्वामित्व एक पूर्व माइक्रोसफ्ट डाटाबेस ईन्जिनियर र मेडिकल मारिजुआना डिस्पेंसरी मालिक हो। हामीलाई थाहा छ मनोरञ्जन र मेडिकल मारिजुआना बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न कत्ति गाह्रो छ। यो सुनिश्चित गरेर कि तपाइँको वेबसाइट त्रुटिहरूबाट मुक्त छ र सही रूपमा अप्टिमाइज गरिएको छ तपाइँ तपाइँको प्रतिस्पर्धा मा एक जम्प प्राप्त गर्नेछ।
आज हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् नि: शुल्क एसईओ अडिट तपाईंको हालको वेबसाइट वा तपाईंको वेबसाइटको बारेमा कुनै प्रश्नहरूको उत्तर दिन।
यहाँ क्लिक हाम्रो सम्पर्क फारम भर्नुहोस्
श्रेणी: ब्लगBy codecafe जुलाई 3, 20173टिप्पणिहरु
टैग: औषधालय खोज ईन्जिन अनुकूलनमारिजुआना SEO
पछिल्लोपछिल्लो पोस्ट:लेफ्लाइ र वीडम्यापहरूले २०१ 2019 मा विज्ञापन गर्न कति शुल्क लिन्छ?अर्कोअर्को पोस्ट:Ways तरीकाहरू तपाईका कर्मचारीहरूले एसईओ मार्फत तपाईंको व्यवसायलाई बढी कमाउन मद्दत गर्न सक्दछन्
एसईओ परामर्श भन्छन्:
जुलाई 1, 20209मा: 06 बजे
मैले यो ब्लग पोष्टमा रमाईलो गरें! म तपाईंको ब्लग साइट निष्पक्ष समीक्षा गर्दछु
सामान्य रूपमा साथै तपाईं निरन्तर केही डरलाग्दा चीजहरू बाहिर निकाल्नुहुन्छ।
मैले यो मेरो फेसबुकमा मनोरन्जन भांग डिस्पेंसरीहरू र मेरो फ्यानहरू मनपराउँदा साझा गर्‍यो
it! राम्रो काम राख्नुहोस् 🙂
जुलाई 2, 20202मा: 26 बजे
खोज इन्जिन अप्टिमाइजेसन प्रयोग गरी मनोरञ्जन मारिजुआना औषधालय प्रयोग गरेर विधि कमाई
30० दिन पछि मात्र, मैले सपना देखेको छु भनेर निश्चित गर्न मैले आफैलाई पिन्च गर्नु पर्छ।
मैले आफ्नै आरामदायी चार पर्खालहरूमा प्रत्येक महिना हजारौं डलर कमाएँ।
नाफा बढ्छ र बढ्छ र बढ्छ!
यसले केहि मिनेट लिन्छ
केवल केही क्लिकको साथ, तपाईं प्रति दिन $ १,15,000,००० उत्पन्न गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो बाँकी जीवनको लागि
सांसारिक कम्फर्ट्स सीबीडी भन्छन्:
अगस्ट 8, 2020 12 मा: 11 हूँ
उत्कृष्ट लेख डिस्पेन्सरी वेबसाइट डिजाइन र SEO।